ओठमा कोठी भएकाहरु यौनका प्यासी, शरीरमा कहाँ कोठी हुँदा के हुन्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं, वैशाख १६ । शरीरमा हुने साना कालो थोप्लोलाई कोठी भनिने गरिन्छ । जसबारेमा विभिन्न विश्वासहरु रहेको छ ।
शरीरको जुन स्थानमा कोठीहरु रहेका छन् त्यसको छुट्टै महत्व रहने विश्वास मानिने गरिन्छ । शरीरका कुन स्थानमा कोठी हुदा कस्तो प्रभाव पर्छ त ?
याे पनि पढ्नुस खुशीकाे खबर, महिनावारी हुँदा अब प्याड लगाउनु नपर्ने
दाहिने गालामा कोठी हुनेहरु भाग्यमानी हुने विश्वास गरिन्छ । आँशु झर्ने ठाउँमा कोठी हुने मानिस भने भाग्यमानी नभएको ज्योतिषहरुले पनि भन्ने गरेका छन् । त्यस्तै निधारमा कोठीहुनेहरु वलवान मानिन्छन् ।
जो पुरुषको चिउडोमा कोठी छ उसले श्रीमतीले भन्दा बढी माया नगर्ने विश्वास मानिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस महिलाले चरम यौनसन्तुष्टि कसरी प्राप्त गर्ने ?
बाँया आखाको ढकनिमा कोठीहुनेको दाम्पत्य जीवन सुखी नहुने विश्वास गरिन्छ । त्यस्तै दाहिने गालामा कोठी हुने मान्छे धनी हुने, वाँया गालामा कोठी हुने खर्चालु हुने विश्वास छ ।
त्यस्तै ओठमा कोठी भएका मानिस यौनका प्यासी हुने विश्वास गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै नाकमा कोठीहुनेहरु फिरन्ते खालका हुन्छन् । कानमा कोठी हुनेहरुको आयु छोटो भएको विश्वास लिइन्छ ।
याे पनि पढ्नुस विवाहअघि सेक्स गरेका महिलालार्इ बिहेपछि रुची हुँदैन ?
ट्याग्स: Female, Kothi